Sida loo tirtiro gabi ahaanba telefoonka aad Android
Ma waxaad u doonaya inuu iska iibiyo telefoonka aad Android inay soo iibsadaan phone kale? Ama waxaad doonayaa inaan u baabbi'in telefoonka baxay. Ka hor inta aadan sii wadin qabanqaabada iibiyo phone android joogo aad, idinku waajib ah inaad aad u hubiso in aad ka telefoonka masixi macluumaadkaaga gaarka ah. Tani waa lagama maarmaan ma aha tan ogahay inaad telefoonka wuxuu ku dhamaan doonaa ama kuwa telefoonka wuxuu ku dhamaan doonaa ilaa la. Halkan waa maqaal ah in ugu fiican muujinaysa sida ay u gebi ahaanba tirtiri telefoonka aad Android oo isticmaalaya farsamooyin kala duwan laba. Habka koowaad waa ay warshad resetting telefoonka aad Android iyo habka labaad waa iyada oo la isticmaalayo Wondershare MobileTrans.
Ha ogolaan in dhammaan xogta ay Warbixannada Factory
Keddibna Factory waa wax soo saarka celin ah qalab kasta oo elektaroonik ah oo ay qaabka gaar ah. Tani jirsado taleefanka si ay gobolka asalka ah iyadoo la tirtirayo qayb weyn oo xogta laga heli karaa qalab isku dayaya in ay soo celiso qalab in goobaha ay soo saaraha gaar ah. Laakiin ka hor soo celinta goob warshad aad; waa in aad sir qalab aad.
Android users laga yaabaa qabaa in ay macluumaad shakhsi ah ayaa si ammaan ah cirib la keddibna warshad, weli aan runta. Habka sirta dirida doonaa macluumaad ku saabsan qalab aad iyo, iyadoo aan loo eegin waxaa macquul ah in tirtiri uusan si buuxda u masixi macluumaadka; key gaar ah waxaa qasab ku noqoneysa inay u unscramble.
Si sir qalab Android aad, raac tallaabooyinkan.
Talaabada 1: From aad menu Android, furo app Settings iyo hoos u dhaqaaq Security. Tubada in la furo goobaha ammaanka ah.
Talaabada 2: Under menu sirta ah, dooro "qalab sir" iyo awood.
Waxaad u baahan doontaa si aad u hubiso telefoonka waxaa ku xirnayn ama si buuxda u soo oogay inta ay socoto sirta ah, taas oo qaadataa qiyaastii saacad si uu u dhameystiro ku xiran tahay qadarka xogta ku kaydsan telefoonka. Leave telefoonka on halka sirta la karti. Marka geedi socodka la dhammeeyo, furo Settings mar kale iyo hubi in aad aragto haddii ay ku taal "Windows XP" kaadhkaa hoos sirta doorasho kaydinta telefoonka.
Ka dib markii imayl telefoonka, aad haatan karaa tallaabada xigta oo la "warshad aad Device ee dejinta celinta". Halkan waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo si ay u soo celinta goob warshad qalabka Android;
Talaabada 1: From screen Home ku, riix badhanka Menu iyo tagaan oo ay u Settings.
Tallaabada 2: U tag ah "Guud" tab iyo dooro "kaabta iyo dib".
Talaabada 3: Dooro "Factory dib xogta" ikhtiyaarka ugu hooseysa.
Talaabada 4: Tubada "Dib u celi qalabka" hoose ee shaashadda.
Geedi socodka qaadan karaa daqiiqado yar, laakiin telefoonka ugu danbeyn reboot doonaa oo idin waydiisan aqoonsiga aad.
Ha ogolaan in dhammaan xogta la isticmaalayo Wondershare SafeEraser
Keddibna Factory waa istaraatijiyad caadiga ah aad ayaanu ku isticmaali marka aad u baahan tahay in la siiyo ama la iibsado telefoonka Android jir ama kiniin. Waxaad u malaynayso in aad u tirtiri wax walba oo ku saabsan telefoonka Android ama kiniin adigoo samaynaya Factory ah si kastaba ha ahaatee dib, waa run ma aha. Keddibna Factory ma tirtirto dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonka Android ama kiniin. More xun weli, macluumaadka waxaa tirtiro waa difaaci ka mid ah mid qalab kabashada xogta iyo la effortlessly soo kabsaday karo. Si aad u tirtiri phone Android ama kiniin gebi iyo weligiis, go'aanka ugu wanaagsan waa in ay ku taageeraan khabiir software Tirtirin Android sida Wondershare SafeEraser.
Wondershare SafeEraser waa qalab weyn kaas oo awood kuu ay u tirtiri wax walba oo ku saabsan telefoonka Android ama kiniin. Wax walba waa recoverable duwan celinta goob warshad. Wondershare SafeEraser waa qalab ku haboon Android & macruufka "masixi" Codsiga loogu talagalay in si joogto ah tirtiro dhammaan macluumaadka shakhsinimo oo ka qalab US isticmaalaya Creech Military-ka qoraal technology moodo xogta unrecoverable; soo laabtay qalabka si ah "Suuliyada nadiif ah" gobolka ka hor inta aadan iibin, deeqdo ama u ganacsadaan.
Sida loo tirtiri Android phone la SaefeEraser Wondershare
Talaabada 1: Open Wondershare SafeEraser iyo xirmaan telefoonka Android inay computer la cable USB ah. Fadlan hubi in aad karti hab Debugging USB telefoonka ku sameeyo. Ka dib markii la xidhiidha, barnaamijka wuxuu muujin doonaa sida hoos ku qoran.
Talaabada 2: Riix masixi Dhammaan Macluumaadka ku saabsan barnaamijka. Markaas raac edbinta in ay galaan "tirtirto" inay xaqiijiso amarka. Riix masixi Hadda u dhaqaaqo.
Talaabada 3: Markaas barnaamijka bilaabi doonaa tirtiro oo dhan content ku saabsan telefoonka, oo ay ku jiraan xiriiro, videos, photos, music, barnaamijyadooda, iwm
Talaabada 4: Kadib markii geedi socodka cadaymihii la dhammeeyo, garaac Factory Data celi ama masixi All Content taleefanka si ay u tirtiri oo dhan goobaha nidaamka. Markaasay aad telefoon si buuxda loo masixi doono.
Halkan waa wax yar oo dheeraad ah talooyin aad u faa'iido badan oo ku saabsan waxyaabaha aad samayn lahaydeen oo ka hor iibinta ama siinta iska qalab Android jir.
Dib xogta iyo dejinta on in aad xisaabta Google - Tani waxay noqon kartaa Ololaha Nolol marka uu wakhtigu yimaado. Abuuritaanka gurmad ah on your computer had iyo jeer waa wanaagsan yahay, Si kastaba ha ahaatee, marka aad la abuuro gurmad ah qalab Android aad on account Google ah, waxa ku siinayaa xoogga dhaqdhaqaaqa. Waxaad xogta aad la dhinac saddexaad oo sidoo kale gurmad kartaan gurmad android qalabka. Waxaad markaas dib u soo ceshano kartaa xogta oo dhan iyo gaar isticmaalaya computer kasta. Waa in aad badbaadin dhammaan macluumaadka ay u samayn la daadiyo, xiriirada, jadwalka taariikhda, Gmail, waraaqaha Google Drive, Bookmarks web browser, in aan la iloobin ee photos Google+ oo dheeraad ah.
Dib sawiro iyo videos - WordPress, Flickr, iyo Microsoft OneDrive yihiin dhammaan fursadaha aad u fiican si aad u badbaadin oo dhan sawiro iyo videos in aad leedahay qalabka Android aad. Dhab ahaantii, waayo, Photos, Flickr xitaa ku siinayaa meel humongous ee 1TB. Waa maxay sababta aan u isticmaasho waxaa ka mid ah ka dibna, huh.
Back aad qoraalka iyo wac taariikhda - walaacsan badiyay baxay fariimaha oo dhan iyo wac taariikhda, looma baahna in la walwalsan tahay sida aad hadda u isticmaali kartaa software cajiib ah free loo yaqaan ee kaabta + SMS in aad kala soo bixi kartaa ka u Google Play Store . Wuxuu badbaadin doonaa oo dhan Guda qoraalka iyo call gal ah in aad xisaabta Gmail.
Disable Reactivation Lock - Tani waxay la mid tahay tallaabo aad u muhiim ah. Waa in aad gab Lock Reactivation haddii ay dhacdo in aad ka hor inta uusan u qotomiyey ag maraya in Settings> Security> iyo unchecking Lock Reactivation halkaas.
> Resource > masixi > Sida loo guud Masax Android Phone